I-25 YEENWELE EZIGQWESILEYO ZABAFANA ABANAMABUSO AJIKELEZILEYO (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
I-25 yeeNwele eziGqwesileyo zabafana abanamaBuso ajikelezileyo
Eyona Iinwele Zamadoda I-25 yeeNwele eziGqwesileyo zabafana abanamaBuso ajikelezileyo
Ukuchonga ezona zinwele zilungileyo kumadoda ajikeleze ubuso kunokuba ngumsebenzi onzima. Kuba abafana abanobuso obujikelezileyo baneenwele ezimbalwa kunye nezitayile abanokukhetha kuzo, ukufumana iinwele ezifanelekileyo…
Ukuchonga ezona zinwele zilungileyo kumadoda ajikeleze ubuso kunokuba ngumsebenzi onzima. Kuba abafana abanobuso obujikelezileyo banenwele ezimbalwa kunye nezitayile onokukhetha kuzo, ukufumana iinwele ezifanelekileyo ukuze zilungele obu bume bobuso kunokuba nzima. Ngethamsanqa kuwe, sifumene iinwele ezininzi ezipholileyo kunye nezinwele ezimfutshane zabafana abajikeleze ubuso.
Kwisikhokelo esingezantsi, siza kukubonisa indlela yokujonga imilo yobuso bakho kwaye emva koko sikuncede ekukhetheni iinwele eziphezulu ukuba uyindoda ejikeleze ubuso. Ngapha koko, uninzi lwezi zinto zilandelayo zokucheba iinwele kubafana ezinobuso obujikelezileyo ziiyantlukwano zokusikwa kunye nezitayile ezithandwayo.
indlela yokucheba ukucheba iinwele
1Ukuchonga Ubume boBuso bakho
MbiniEyona ndawo ijikelezileyo yokucheba iinwele
3Ezinye iiNwele eziPhezulu eziPhezulu zoBuso obujikelezileyo
4Ukudibanisa kunye neNxalenye eNzima
5I-Undercut ene-Brushed up Hair kunye ne-Scruff Beard
6Ukuphela okuphezulu kunye neQuick Quiff
7Ukulahla ukuKhanya ngokuKama okude ngaphezulu
8Amacandelo e-Tapered kunye neNwele eziMde eziKhehliweyo
9Ukuphela okuphezulu okuphezulu kunye neendevu
10Ulusu olusezantsi luphela ngeCandelo eliNzima kunye neBrashi phezulu
Shumi elinanyeUkuPhakathi okuphakathi kunye neHard Part Comb Over
12Amacandelo amafutshane ane-Textured Slick Back kunye neendevu
Ukuchonga Ubume boBuso bakho
Ngaphambi kokukhetha ukunqunyulwa kweenwele ngokusekwe kubuso bobuso, kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba uyichongile imilo yobuso bakho ngokuchanekileyo. Ngokubanzi, ubuso obujikelezileyo bunezinto ezithambileyo ezinama-engile abukhali kakhulu kwaye zilinganisa malunga nobubanzi nokuphakama. Umzekelo, amadoda ajikelezileyo ahlala engenawo umhlathi otyhidiweyo okanye amathambo omelele esidleleni.
Ukuba unengxaki yokumisela ubuso bakho, thelekisa eyakho nemifanekiso engezantsi ukuze ufumane umbono wokuba injani na indoda ejikeleze ubuso.
Eyona ndawo ijikelezileyo yokucheba iinwele
Isitshixo seenwele ezilungileyo zamadoda zobuso obujikelezileyo kukongeza ivolumu ephezulu ngaphandle kokwenza ubuso bakho bube banzi. Ngokufanelekileyo, abafana kufuneka bafumane amacala amafutshane, iinwele ezinde ezingaphezulu zokuphakamisa ubuso kunye nokuzinika ii-angles ezingaphezulu. Ngokufanayo, thintela ukusikwa kwe-buzz okanye iinwele ezimfutshane kakhulu ukunqanda ukongeza ukujikeleza okungaphezulu kwentloko yakho.
Ngezo ngcebiso zesitayile engqondweni, zama enye yezi ndlela zezitayile zide okanye ezimfutshane kwaye uzidibanise nokuba ziphele okanye zihambe emacaleni.
Ipompadour yenye yezona ndlela zipholileyo zokuphola iinwele zobuso obujikelezileyo. Isitayela se-pompadour sesimboli songeza ivolumu kwizinwele zakho ngaphandle kokongeza ububanzi obuninzi ebusweni, ngakumbi xa zidityaniswe nolusu oluphezulu okanye oluphantsi. Ukuthambisa ipompadour kuya kufuna ipomade elungileyo yokwenza ukuphakama nolawulo.
Inkqubo ye- ifeksi yenye yeenwele ezithandwayo zamadoda. I-taper fade emacaleni ngeenwele eziba nde ukuya kumbindi wentloko, i-fohawk yindlela entle yokongeza ukuphakama kunye nobukhulu kwizinwele zakho. Uhlobo oluchaziweyo, olufana ne-mohawk lwe-faux hawk lu-edgy kwaye lwanamhlanje, ke le nwele ilungele amadoda anobuso obujikelezileyo afuna ukuzama into entsha. Nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo uya kufuna imveliso yesitayile esemgangathweni!
Iinwele zeSpiky yindlela elula yokongeza ivolumu kwiinwele ezimfutshane. Ukuphakama okudalwe ziipiks kuyakulinganisa ububanzi bobuso obujikelezileyo kwaye kubonelele ngenkangeleko eshushu, eyoyikisayo. Ukwandisa izibonelelo zokunqunyulwa kunye nesitayile, qiniseka ukuba ufumana ukuphela.
Iinwele ezotyiweyo ezithandekayo zilula ngokwenyani- konke okudingayo ukuze ufumane i-spikes ubuncinci zii-intshi ezimbini zeenwele ngaphezulu Nangona i-spikes zilula ukuzenza xa iinwele zakho zimfutshane, abafana banokukhetha ukujonga okugqithileyo ngeenwele ezinde.
Inxalenye esecaleni yokucheba iinwele zezona ndawo zilungileyo zobuso ezijikelezileyo kuba ithatha ingqalelo isuka embindini wobuso kwaye iyalathise ecaleni. Icandelo elisecaleni kunye nekama ngaphezulu kweenwele zilula kwaye ziyaguquguquka, kwaye azidingi kulondolozwa kakhulu okanye umzamo wesitayile. Kumadoda oshishino okanye kubafana abafuna a ukunqunyulwa komhlekazi , icandelo elisecaleni likhetho eliqhelekileyo, elinobuchule.
Ukuthayipha icandelo elisecaleni, qala uthathe isigqibo sokuba leliphi icala ongathanda ukwahlula kulo iinwele zakho. Emva kokufaka ngokulinganayo pomade ngeenwele zakho, kama iinwele zakho kwelo cala. Ukongeza ivolumu ngaphambili yindlela elungileyo yokwenza inkangeleko, yokujonga okwangoku.
Ngokufana ne-pompadour, i-quiff yindawo eshushu yekhanda kumadoda anobuso obujikelezileyo kuba ibonelela ngevolumu eyaneleyo yokwenza umgama omde, othomalalisayo. Ngokudibanisa imveliso yokuhombisa iinwele kunye nokwenza isinxibo esithandekayo, abafana abanakuhamba gwenxa ngesitayile.
I-undercut eqhawulwe eneendevu
Ukwenza isitayile, dibanisa umphambili weenwele zakho ngelixa usomisa. Sebenzisa iminwe yakho ukuphakamisa i-quiff phezulu kwaye ungeze ivolumu. Sebenzisa ipomade okanye i-wax iya kubamba iinwele endaweni kwaye ivumele ukuba ihlale yonke imini.
Ezinye iiNwele eziPhezulu eziPhezulu zoBuso obujikelezileyo
Zininzi iinwele ezilungileyo kumadoda ajikeleze ubuso. Ukuba ufuna ukuzama ukusika kunye nesitayile ngaphandle kwe-quiff, icala elisecaleni, i-faux hawk, ipompadour kunye neenwele ze-spiky, emva koko jonga iinwele ezipholileyo zabafana abajikeleze ubuso apha ngezantsi!
amadoda ecaleni entanyeni tattoos
Ukudibanisa kunye neNxalenye eNzima
I-Undercut ene-Brushed up Hair kunye ne-Scruff Beard
Ukuphela okuphezulu kunye neQuick Quiff
Ukulahla ukuKhanya ngokuKama okude ngaphezulu
Amacandelo e-Tapered kunye neNwele eziMde eziKhehliweyo
Ukuphela okuphezulu okuphezulu kunye neendevu
Ulusu olusezantsi luphela ngeCandelo eliNzima kunye neBrashi phezulu
UkuPhakathi okuphakathi kunye neHard Part Comb Over
Amacandelo amafutshane ane-Textured Slick Back kunye neendevu
Izinwele ezinabadlali abangama-25 beSoka
Ukuphela kweenwele zeTemp
Ungayifumana njani iVenus Triad yakho (+Ibuchaphazela njani ubudlelwane bakho)
ISikhokelo esiGqibeleleyo sokuBonelela ngeNkwenkwezi Iimpawu eziKhuphukayo
I-40 yeenwele zeNtsimbi eziBalaseleyo zaMadoda aneenqwelo moya eziReciding
Amaxabiso eTattoo: Ixabisa malini iitattoos?
I-45 yeeNwele zeKhonkco eziBalaseleyo zaMadoda
Amakhwenkwe amnyama angama-25
iinwele zesondlo eziphantsi zamadoda
amadoda amnyama aphezulu fade
iinwele ezinde zeenwele zamadoda
iinwele zeenwele ezinde zomntu
imifanekiso yee tattoos ezingalweni
21 Iindawo ezininzi eziBuhlungu zokufumana iTattoo